China 2021 trano fandroana mora vidy acrylic tsotra fandroana anaty rano fandroana hidina fantsona fandroana orinasa sy ny mpamatsy | Belle
2021 trano fandroana mora vidy trano fandroana akrilika vita anaty fandroana ao anaty fandroana fandroana
Fampisehoana fanasokajiana vokatra an'ny orinasa
Fampahalalana parameter an'ity vokatra ity
Warranty: 5 taona, 2 taona Fitaovam-piadiana: tsy misy
Serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera, fametrahana eo an-toerana, fanofanana eo an-toerana Style: nandinika lalina
Halavany: 1.7m Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: famolavolana sary, famolavolana modely 3D, vahaolana tanteraka ho an'ny tetikasa
Fampiharana: Trano fonenana Style Design: ANKEHITRINY
Model Model: EC-4001 Fitaovana: Acrylic, akrilika
Function: Milomano, Misy ny fanorana rivotra Fametrahana karazana: Mitete-in
Drain Toerana: ahitsy Loko: fotsy, mena, mainty ...
Endrika: mahitsi- Habe: 1700 * 700 * 390mm
Anarana: Fandroana tsotra Acylic MOQ: 10 Pcs
Anaran'ny vokatra: fandroana fandroana tsotra fandroana akrilika fandroana Karazana fanorana: Fanorana amin'ny tadio
Fahazoana entana 1000sets 40HQ Fepetra fandoavana T / T, L / C, OA
Ora nanomezana 20-30 andro
1000 Set / Sets isam-bolana
1. Fiarovana sarimihetsika bubble voalohany,
2. Baoritra mahazatra
Asehoy ny fandroana
Fametrahana kovetabe fandroana
Raha lazaina amin'ny fomba somary fohy, ny koveta fandroana miorina dia azo ampidirina eo akaikin'ny rindrina amin'ny fiandohan'ny famolavolana nefa tsy mihetsika, ary mora ny mifandrindra amin'ny fomba fandroana amin'ny ankapobeny.
Fametrahana fandroana miorina
Ny fametrahana fandroana anaty rano dia mihevitra ny anton-javatra toy ny enta-mavesatra, tsy tantera-drano, fikojakojana, hatsarana, fampisehoana serivisy sns.
BELLE dia manana 800 + MOLD.
MISY IRAY FOANA IANAO
KIN DS maromaro an'ny safidin'i BATHTUB:
BUATD-IN BATHTUB; MASSAGE BATHTUB;
Fiantohana amin'ny kalitao sy fiarovana
A: Ie. Ny orinasa misy anay dia ao Pinghu. Any akaikin'i Shanghai sy Hangzhou no misy azy. Tongasoa eto mba hitsidika ny orinasa raha avela ny fotoana.
Fomba fametrahana tanteraka ny fandroana miharo ：
Ny fomba fametrahana fandroana anaty rano dia fomba fitehirizana habaka bebe kokoa. Ny fametrahana fandroana miorina dia tokony handinika ireo anton-javatra toy ny enta-mavesatra, tsy tantera-drano, fikojakojana, hatsarana ary fampisehoana. Ny ankamaroany dia apetraka amin'ny lafiny iray amin'ny trano fidiovana.
1. Dingana manokana amin'ny fametrahana fandroana anaty rano
(1) Rehefa vita ny fantsona, ny ampahany voakazo dia amboarina mba tsy ho tantera-drano, ary ny fitsapana fitehirizana rano 24 ora dia hatao mba hahazoana antoka fa tsy misy famoahana;
(2) Fametrahana sy famitana biriky mifanaraka amin'ny fomba mahazatra;
(3) apetaho ny koveta fandroana: apetraho amin'ny bata ny bata. Ny haavon'ny kovetan'ny fandroana dia matetika ao anatin'ny 600mm. Ampifandraiso ireo fantson-drano ambony sy ambany ary avelao tsy ho voasakana izy ireo. Avy eo, ny biriky vita amin'ny foam dia ampiasaina hananganana rindrina sy handalofana azy ireo. Tandremo ny lavaka fikojakojana amin'ny toerana mifanaraka amin'ny fantsona midina, manodidina ny 250x300mm;
(4) Azonao atao ny mampiasa fomba mitovy amin'ny rindrina rindrina, mozika, vato artifisialy, marbra ary vy tsy misy fangarony araka ny fanao tianao.
2. Fitandremana amin'ny fametrahana fandroana anaty rano
(1) Ny rindrina ambany na henjana manodidina ny kovetabe fandroana dia tokony hanana hery manohana ampy, ary ny fasika manodidina azy dia hotampenana. Ho fanampin'izay, aza mampiasa biriky na zavatra mafy hafa hanohanana ny faran'ny fandroana, mba tsy hanimba ny glasy mandritra ny fampiasana. Farany, ny fanambanin'ny kovetabe fandroana sy ny zoro rehetra amin'ny fandroana dia tokony hifandray amin'ny lafiny rehetra amin'ny hery fanamiana;
(2) Tandremo ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny fantson-drano sy ny fantson-drano;
(3) Rehefa mametraka taila, dia avelao ny fisokafan'ny fanaraha-maso ny rano. Raha te ho tsara tarehy ety ivelany dia azonao atao ny mampiasa lakaoly hametahana ireo taila amin'ny lavaka mba tsy ho hita avy any ivelany izy ireo, ary azo esorina mora foana ireo taila mandritra ny fanovana.
(4) Alohan'ny hametrahana ny kovetabe fandroana dia miangavy hametraka fittings rano ary manaova fanandramana rano mihidy 24 ora mba hijerena raha misy fivoahan'ny rano isaky ny tonon-taolana.
(5) Rehefa mametraka ny kovetabe fandroana dia alao antoka fa somary ambany kokoa noho ny hafa ny faran'ny fantsakana iray. Ny farany ivelany dia ho ambany kely noho ny farany anatiny.
(6) Ny haben'ny fandroana tena izy dia mety tsy hitovy amin'ny haben'ny anarana. Rehefa mividy sy mametraka, azafady mandrefy eo amin'ny tranokala aloha ary tazomy ny fandeferana mahazatra mba hanamorana ny fametrahana.
(7) Ny downpipe dia tokony ho avadika S miolaka kely mba hisorohana ny tsiranoka.
Ny fiakaran'ny fomba tafiditra dia mamela ny famoahana ambony indrindra ny habaka ankohonana. Amin'izao fotoana izao, niditra tao amin'ny fiainantsika tsikelikely ny kovetabe fandroana anaty ary lasa fironana ankehitriny.
Ny koveta fandroana voaforona dia hevitra famolavolana koveta fandroana mahatalanjona, ary ny fandroana miorina be ao anaty tany dia mamaritra ny fiainana lafo vidy. Ny kovetabe fandroana ao anaty dia toerana malalaka malalaka, mampiasa singa voajanahary maro, toy ny gorodona hazo na vatokely eo amoron'ny sisin-tany manodidina ny fandroana. Ny tontolo manodidina ihany koa dia feno tsiro voajanahary, misy varavarankely frantsay lehibe sy voninkazo ivelany isan-karazany.
SOA VALIM-pamokarana sy tombony fanaterana
Belle natsangana tamin'ny taona 2010, dia orinasa mitarika indostrian'ny fanadiovana ny fahadiovana. Belle manarona 20 000 metatra toradroa. Manana orinasa fanampiny 1.
Manodidina ny 200 ny mpiasa, ao anatin'izany ny maherin'ny 10% ny injeniera sy teknisiana zokiolona ary olona 5 ao amin'ny departemantan'ny R&D. Ny fanodinana ny taona 2018 dia nahatratra 9 tapitrisa dolara.
Belle dia nampiditra ny tsipika famokarana mandeha ho azy, ny famokarana mahomby kokoa. Ny fivoahan'ny mpiasa zato ao Belle dia mitovy amin'ny an'ny mpiasa an-jatony amin'ny orinasa hafa.
Teo aloha: Sampana maimaim-poana amin'ny indostrialy fametrahana fandroana freestanding - fividianana mafana fandroana acrylic freestanding 4 tongotra ambony - Belle
Manaraka: 2021 koveta fandroana akrilika mpamokatra kalitao avo indrindra